केटाहरु किन यस्तो साधनको प्रयोग गर्न मानदैन्न ? खास कुरा यस्तो « हाम्रो ईकोनोमी
केटाहरु किन यस्तो साधनको प्रयोग गर्न मानदैन्न ? खास कुरा यस्तो
एक अध्ययनले युवाले यौन सम्पर्कको समयमा कन्डमको प्रयोग गर्ने रुचिमा कमी आएको देखाएको छ।
अमेरीकाको इन्डियाना विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले युवामा कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता घट्दै गएको देखाएको हो। सन् २००२ देखि २०१० सम्ममा आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कको समयमा करिब ८० प्रतिशत युवाले कन्डमको प्रयोग गर्ने बताएका थिए। तर हालै गरिएको अध्ययनले सो संख्या घटेको देखाएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु ७० को हाराहारी र त्योभन्दा माथि छन्
नेकपा स्थायी समिति बैठक बोलाए प्रधानमन्त्री ओलीले
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ११ बजेका लागि
ओली नेतृत्वको नेकपाले सूर्य चिन्ह पाउने पक्का
अहिले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गर्दा एक थरी र नेकपाका दुई समूहले
अहिलेका युवा गायक सञ्जय उपमन्यु पाण्डेको ‘द्रव्य मोह’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
नुवाकोटका अहिलेका चर्चित युवा गायक सञ्जय उपमन्यु पाण्डेको ‘द्रव्य मोह’ गीतको भिडियो सार्वजनिक